Japan's Nikkei Index inodambura zvese zvinotsigirwa | Ehupfumi Zvemari
Nikkei Index yeJapan inodambura zvese zvinotsigira
IJapan stock market yakatumira chiratidzo chakajeka kuvashambadziri vekuMadokero panguva yeKisimusi uye zvechokwadi yakanga isina tariro zvachose. Neimwe yemadonhwe makuru akaitika mumakore achangopfuura uye izvo pasina mubvunzo zvichazopedzisira zvave kukanganisa misika yemasheya yekondinendi yekare uyezve neSpanish. Mune pasi zononoka izvo zvisati zvamboitika mumwedzi ichangopfuura uye kunyangwe zvekutengesa maitiro. Iko kutya kutya kwakanyanya, nongedzera vamwe vevatengesi vane ruzivo rwakawanda mumisika.
Uku kuderera kwemari dzeJapan kwakatungamirwa neimwe kudonha kwakapinza paWall Street. Iko mazwi emutungamiri wepamusoro weUnited States Federal Reserve (fed) asina kutambirwa zvakanaka nevamiriri vakasiyana vezvemari maererano nehurongwa hwemari huchaitwa kune rimwe divi reAtlantic. Kunyangwe Mutungamiri VaDonald Trump pachavo vakafanirwa kupindira vakatarisana nezviitiko zvekutendeuka zviri kutora mazuva ano akakosha.
Chero zvazvingaitika, pane chinhu chimwe chete chechokwadi chekuti vadiki nepakati varimi vanotoziva uye kuti gore rino havazove nezvinotarisirwa Krisimasi pati rally. Rally yakanaka, hongu, asi ine yakamisikidzwa kudzika maitiro, ine simba isingawanzoonekwa mumwedzi ichangopfuura. Kusvika padanho rekuti mazhinji emastock exchange exchange ari kuzopera mwedzi waZvita nekurasikirwa padhuze ne10% uye mune mimwe misika yemasheya kunyangwe ine simba rakanyanya. Mune mamwe mazwi, maonero asingafadzi emasimba ane simba emusika wemari.
1 IJapan Stock Exchange inopa chiziviso
2 Izvi zvinokanganisa misika yeEuropean stock
3 Zvikonzero zvekuita uku
4 Hupfumi hweJapan huri kuita zvakanaka
5 Matanho pamakumi makumi maviri emapoinzi
6 Trade hondo pakati pemasimba
IJapan Stock Exchange inopa chiziviso
Iyo Nikkei, indekisi iyo inosanganisira iwo mazana maviri nemakumi maviri nemashanu emamiririri anomiririra mumusika weJapan, akaita danho iri Muvhuro zvishoma zvishoma kupfuura 5%. Kusvika padanho rekuti yaenda kune gumi nemakumi mashanu neshanu nepfumbamwe. Kuputsa iyo yakakosha uye yepfungwa nhanho yemakumi maviri emapoinzi uye mune chero mamiriro ezvinhu iri pazasi yayo yakadzika kubvira Kubvumbi 19.155,74 yegore rapfuura. Kunyangwe chakaipisisa pane zvese ndechekuti chiJapan stock index yapinda mumujaho une njodzi kupfuura iwo uyo usingazive kuti zvichatora kusvika papi mumwedzi iri kuuya kana kunyange makore.
Kubva pane akajairika mamiriro yakatarisa kumabvazuva kure, Zvinozivikanwa zvirinani kuti kudzikisira kukuru uku muzuva rimwe chete ndiko kunonyanya kutaurwa kubva muna Mbudzi 9, 2016. Zuva iro sarudzo dzeUnited States dzaiitika uye zvakaita kuti VaTrump vatore chigaro chemutungamiri wenyika yavo. Asi chakanyanya kukosha chinhu dhomosi mhedzisiro inogona kudonhedzwa mumabhizimusi eJapan mune mimwe misika padhuze neSpanish. Mugore rave kuda kupera uye kubva kwaro zvachose hapana chingatarisirwa.
Izvi zvinokanganisa misika yeEuropean stock
Kune chikamu chayo, the Topixyakafara kupfuura iyo Nikkei 225 uye iyo inosanganisira zviuru zviviri zvemafemu ane musika mukuru capitalisation, yakarasika 4,88%. Iko kuti, angangoita makumi manomwe neshanu mapoinzi, ayo anoratidza kukomba kwakanyanya kwekufamba uku mumisika yezvemari. Neimwe nzira, isingatarisirwe nekuda kwekukosha kwayo uye humhutu mukudonha kunoitika pakutanga kwemazororo eKisimusi. Zvino isu tichafanirwa kumirira mhinduro yemisika yeEuropean equity, kunyangwe pasina chakanaka chinotarisirwa. Kwete zvishoma.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mumisika yeEuropean misika gore rave kuda kupera. Pane zvikamu zviviri chete zvekutengesa zvasara, nhasi China nemangwana. Nekuti pazuva rekupedzisira regore, ichokwadi kuti misika yemasheya ekumadokero ichavhura madhoo avo, asi pakati pechirongwa sezvakaitika musi weKisimusi. Kunyangwe mune chero zvazvingaitika, vashoma uye vepakati varimi vanotya zvakanyanya, neyakajairwa nevose vanoita mari vanozosarudza kugara mumamiriro e kukwana zvachose. Kunyangwe paine zano rakapesana riri kuvhurwa nevamwe vamiririri vezvemari.
Zvikonzero zvekuita uku
Vaongorori vanoti kudzoka kwanhasi muTokyo kunokonzerwa nekukakavadzana kwakafanana, kuchiri kunonoka, uye nekurwiswa kutsva nemutungamiri weUS, Donald Trump, vachipesana nasachigaro weFederal Reserve (Fed), Jerome Powell. Asi zvese zvinoita sekunge zvikonzero zvakatonyanya uye zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti mamiriro akawandisa ari kudzikiswa muhupfumi hwenyika dzese mumakore mashoma anotevera. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe pamwe kubva kune zvakakosha zveiyi misika yemusika.
Chero zvazvingaitika, pane chechokwadi uye ndiko kukura mune hupfumi hwenyika dzepasi rose ichave yakaderera pane iyo yakagadziridzwa panguva iyo kwasara mazuva mashoma kuti upfuure kune hupenyu huri nani. Nekuti zvirizvo, ongororo idzo dzese masangano epasirese anga achinongedzera kuenda kunzira iyi. Ne kudzikira kwekudzokororwa kune fungidziro yezvehupfumi kutanga gore rino. Kunyangwe panguva ino pasina kunongedzera kudambudziko rakakura rezvehupfumi, kunyangwe paine zviratidzo zvekushushikana chaizvo.
Hupfumi hweJapan huri kuita zvakanaka
Izvi zvinoitika kumisika yeJapan equity hazvienderane nezvataurwa ne Mutungamiriri weJapan Abe. Izvi zvinoreva kuti hutano hwehupfumi hweAsia hwakanakisa uye kuti ese ma parameter ehupfumi ari pasi pekutonga. Saka nei musika wemakambani weJapan aona kudonha uku mumutengo wemasecurity akanyorwa pamisika yemari? Izvo zvinokonzeresa zvinogona kuwanikwa mune exogenous pane zvinogumira zvinhu, uko mwero kukwira neUnited States Federal Reserve ine zvakawanda zvekuita nazvo. Kunyanya munyika yepasi rose senge nhasi.
Naizvozvo musika wemasheya munyika ino uri kutora mamiriro matsva mubumbiro remari iro rinogona kukanganisa hupfumi hwaro. Nekudaro, varimi mune ino nzvimbo yenzvimbo vafunga kuti ndiyo chaiyo nguva yeku unganidza mabhenefiti uye gara wakashomeka mukutarisana nezvingaitika kubva ikozvino. Kunyanya sezvo hunyanzvi hwehunhu hwayo hukuru hwema stock indices hwaderera mumaawa apfuura.
Matanho pamakumi makumi maviri emapoinzi
Kana zvakare haina hanya neNikkei ichityora yakakodzera rutsigiro yayaive nayo pamakumi makumi maviri emapoinzi. Chokwadi ichi chinogona kukonzera kuenderera mukudonha uye kusvika padanho kusvika zvino risingazivikanwe. Mupfungwa iyi, haigone kukanganwika kuti uyu musika wezvemari wakasangana zvakakosha uploads kubvira 2013 uye zvine musoro kuti pane kururamisa kwakasimba kunoenderana nemutemo wekupa uye wekuda. Chero zvazvingaitika, chakaipisisa pane zvese chakavakirwa pachinhu chekuti chakatyora musimboti wekusimudzira munguva pfupi nepakati iyo yaive nayo kusvika mazuva mashoma apfuura.
Izvi mukuita zvinoreva kuti isu tichafanirwa kujairira kuona kuwira mumusika wezvemari wakakosha kukosha kwenyika. Kunyangwe mashandiro anoitwa nevashambadzi vadiki nepakati ari mashoma, kunyangwe paine nguva yekuti yavo technical chinhu unokokwa kutora chinzvimbo mune chero hupfumi hwekudyara. Ikozvino hapana mubvunzo kuti zvichave zvakafanira kuti ufunge futi zano iri uye sarudza mamodheru matsva kuti iro rinowanikwa iro capital riwane purofiti.
Trade hondo pakati pemasimba
Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi, hapana mubvunzo kuti ingangodaro hondo yekutengeserana iri pakati United States neChina inogona kukurudzira kuderera mumusika weJapan wemusika kuti usimbise mumavhiki anotevera. Hazvishamisi kuti ndeimwe yemisika yemari yakanyanya kuburitswa muchiitiko ichi inomuka semhedzisiro yeiyi mhirizhonga yekutengeserana. Kusvika pakuti musika wayo wemasheya unogona kukuvara zvakanyanya kupfuura iwo wezvekuMadokero uye kunyanya aya ekare kondinendi.
Naizvozvo, iyo kuchenjerera Iyo inofanirwa kuve yakajairika dhinomineta yezviito zvako muequity yeAsia simba. Parizvino, pane zvimwe zvakawanda zvaunogona kurasikirwa pane kuwana. Haisi nzvimbo yaunofanirwa kunongedza mari yako nekuti njodzi dzakanyanya kukwirira uye hazvina kukodzera kuita mafambiro ekutenga mumusika wezvemari uyu. Kunyanya, mushure mekuputsa iwo akakosha mazinga ayo anga aine pamakumi makumi maviri emapoinzi, sezvatakambotaura kare.
Chero zvazvingava, zvichave zvakafanira kubhadhara zvakanyanya kutarisisa maitiro ayo mumazuva ekutanga egore idzva iri kuda kusvika kune vese varairidzi. Ivo vanogona kupa imwe imwe chiratidzo nezve mafambiro ayo bhegi iri rinogona kutora kure kure nezvedu. Kunyangwe fungidziro dzisingatombofadze kune yakanaka resolution pane kumwe kukwira mumusika wemasheya weJapan. Mupfungwa iyi, chinhu chinokurudzirwa ndechekuti ubve pamusika uno wakakodzera wezvemari, kunyangwe paine zvikwiriso zvine simba mukukosha kwezvikamu zvemakambani eJapan. Zvekuti nenzira iyi, iyo mari inochengetedzwa inogona kunyatso chengetedzwa, zvinova ndizvo chaizvo zviri nezvayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Nikkei Index yeJapan inodambura zvese zvinotsigira
Zvipo zvinomwe zvakanakisa izvo Magi anogona kuunza kune vanoita mari
Real estate kuwanda